Roa taona ny revolisionan’i Sodàna, mitaky fiovana ny diaben’ny mpanao fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
'Tsy manohitra na iza na iza izahay fa mitsipaka fanilikilihana'
Voadika ny 20 Febroary 2021 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Ελληνικά, Español, русский, English
Tao anatin'ny tsingerintaona faharoa ny revolisiona ao Sodàna, mitaky fiovana haingana kokoa avy amin'ny governemanta tetezamita ny mpanao fihetsiketsehana. Sary nopihana tao Khartoum, Sodàna, 19 Desambra 2020, avy amin'i Mohammed Abdelmonim Hashim, nahazoana alalana.
Manamarika ny tsingerintaona faharoa ny revolisiona sodaney ny 19 Desambra , raha nipoaka tao an-tanànan'i Atbara ny hetsi-panoherana voalohany, ary niely nanerana ny firenena arahana fangatahana fahafahana, fandriampahalemana ary rariny — sy ny fiafaran'ny 30 taona nanapahan'i Omar al-Bashir. Nesorina avy eo i Bashir tamin'ny 11 Avril 2019, taorian'ny fanehoan-kery sy fihetsiketseham-panoherana nahafatesana olona am-bolana maromaro.
Nandritra ny fitondran'i Bashir ny olompirenena Sodaney nizaka ady, fahantrana, fahirano aratoekarena ary fanasaziana. Ireo zavatra nataon'i Bashir no nahatonga an'i Sodàna ho ao anaty lisitra napetrak'i Etazonia ho [firenena mpanohana] ny mpampihorohoro, ka nahasarotra ny fampiasam-bola na ny diplaomasia manerana ny tany.
Tamin'ity taona ity ny olompirenena sodaney ao Khartoum, renivohitra, nihaika ny coronavirus hanao fihetsiketsehana sy hitaky fiovana haingana. Na dia nidera ireo zavabita sy hafa nataon'ny governemanta tao anatin'ny roa taona aza ny olompirenena, dia mbola tsy mipaka any amin'ny olompirenena hatrany ny filàna fototra toy ny fikarakarana fahasalamana sy ny fanafody.
Nolazain'ny Departemantam-panjakan'i Etazonia ny fanesorana an'i Sodana ao amin'ny lisitry ny firenena manohana ny fampihorohoroana — fahombiazana mitopatopa ao amin'ny riakan'ireo asa lehibe vitan'ny governemanta tetezamita, toy ny fanorenana indray ny toekarena sy fametrahana holovainjafy ny fandriampahalemana ao Darfur avaratra.
Na dia teo aza ny dinam-pandriampahalemana voasonia tao Juba, dia fandriampahalemana tsy feno izany. Tsy nanao sonia izany ny hetsika mpioko roa lehibe indrindra, ny Sudan Peoples Liberation Movement-North (SPLM-N na Hetsibahoaka Fanafahana an'i Sodàna – Avaratra) sy ny Sudanese Liberation Movement (SLM/A-al-Nur na Hetsi-Panafahana Sodaney).
Samy manana ny fitakiany avokoa ireo mpanao fihetsiketsehana mankalaza ny tsingerintaona faharoa tao Khartoum, tamin'ny 19 Desambra. Ny sasany miantso fanitsiana haingana kokoa avy amin'ny governemanta. Ny hafa miantso rariny, ary misy vitsy miantso ny hanesorana ny governemanta noho ny lazaina fa “nangalatra” ny revolisiona.
Nivory teo amin'ny Lapa Repoblikana sy teo anoloan'ny tranoben'ny Parlemanta ireo mpanao diabe ampilaminana. Nisy ireo sasany niezaka ny hanao sit-in teo anoloan'ny Parlemanta ho fanafainganana ny fananganana Vaomieram-Panaovandalàna Tetezamita, ary misy iray hafa teo anoloan'ny lapa, mitaky ny hanadabohana ny governemanta.
Ao anatin'ny faharoa taona ny revolisiona ao Sodàna, maneho ny heriny ny mpanao diabe ary mitaky fiovana avy amin'ny governemanta tetezamita. Sary nopihana tamin'ny 19 Desambra 2020, tao Khartoum, Sodàna, avy amin'i Mohammed Abdelmonim Hashim, nahazoana alalana.
Na izany aza, naparitaky ny polisy tamin'ny alalan'ny etona mandatsa-dranomaso sy ny baomba mankarenintsofina ny mpanao fihetsiketsehana, ka iray ihany no voalaza fa naratra izay nolazaina fa nisambotra ilay baomba ka hamerina izany any amin'ny polisy saingy nipoaka sy nanapaka ny tanany izany.
Nisy filazana fa maro no sempotry ny ny etona mandatsa-dranomaso, araka ny tatitry ny komity foiben'ny dokotera sodaney.
Namoaka ity sary izay nivezivezy tao amin'ny media sosialy sodaney ity ary tsy nasiany fanehoan-kevitra i Hussam Abu-Alfath, mpikambana ao amin'ny Antoko Kongresy Sodaney, hita ao anatin'izany sary izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny polisy sy mpanao fihetsiketsehana — sariohatra iray mahabe fanantenana amin'i Sodàna vaovao.
Tsikerain'ny mpanao diabe sasany ny dian'ny Praiminisitra Abdalla Hamdock nankany Djibouti tamin'ny aniverseran'ny revolisiona nametraka azy ho eo amin'ny fahefana, saingy ny hafa kosa nilaza hoe nandeha noho ny halehiben'ny raharaha izy. Izy no hitarika ny vovonan'ny IGAD (Intergovernmental Authority on Development, IGAD) ao anatin'ny fotoana ahitana fihozongozonana sy krizy mitatao mivantana ny faritra Afrikana Atsinanana.
Taty aoriana i Hamdok naneho hevitra ny amin'ny tsingerintaonan'ny revolisiona, nisioka:
Anaovako sapaoritra ny vahoaka sodaney lehibe amin'izao tsingerintaona faharoa ny revolisionan'ny desambra mamirapiratra izao, mirary fanambinana ho an'ny tanindrazana sy ny mandrakizay ho an'ny maritiora, ny fiverenan'ny nanjavona, ary ny fanatanterahana ny hetahetan'ny zanakavavy sy ny zanakalahintsika ao anatin'ny fahafenoan'ny fahafahana, fandriampahalemana sy ny rariny, hiaka mikoriana avy amin'ny rany ary nandoa ny ainy sy ny hafaliany noho izany.
Naneho hevitra momba ny diabe ny mpitarika ny SLMA Minawi niteny hoe :
Lohalaharana tamin'ny diabe ny mpanohana anay ary hanohana sy hihazona ny diaben'ny fandriampahalemana fahasiviambinifolo desambra. Tsy manohitra na iza na iza izahay, fa toherinay ny [fanilikilihana].